Myanmar I-Film Fest... (မြန်မာနိုင်ငံတကာရုပ်ရှင်): Rambo (4)
ထိုင်းနိုင်ငံမှာ မြွေဖမ်းတောလိုက်ပြီးနေထိုင်နေတဲ့ ရမ်ဘိုကို အမေရိကန်နိုင်ငံက ခရစ်ယာန် သာသနာပြုအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့က သူတို့ကို မြန်မာပြည်ထဲလိုက်ပို့ဖို့လာခေါ်ပါတယ်။ အစပိုင်းမှာ ငြင်း ပေမဲ့ သာသနာပြုအဖွဲ့ဝင်တွေကို မြန်မာစစိအစိုးရတပ်က ပြန်ပေးဆွဲသွားတဲ့အတွက် ရက်စက်ရမ်းကားတဲ့ မြန်မာအစိုးရကို အံတုပြီး သွားကယ်တဲ့ဇာတ်လမ်းပါ။ လို မြန်မာ့အရေး ထက် ရမ်ဘိုကိုဦးစားပေးပေမဲ့ မြန်မာအစိုးရကိုတော့ ထင်ဟပ်ပါတယ်။
In Thailand, John Rambo is living peacefully capturing snakes and transporting people and cargo in an old boat. But when he joinsagroup of mercenaries to venture into war-torn Burma, and rescueagroup of Christian aid workers who were kidnapped by the ruthless local infantry unit. Rambo refuses, but is convinced by another member, Sarah Miller, to take them up there. When the aid workers are captured by the Burmese army, Rambo decides to venture alone into the war zone to rescue them. Written by Anthony Pereyra hypersonic91@yahoo.com
ရုံတင်သည့်နှစ် (Date of Release) - 2008
အမျိုးအစား (Gerne) - ဇာတ်ကြမ်း (Acion), နိုင်ငံရေး (Politics)
ရုပ်ရှင်ကြည့်ရန် (To Watch) - ဒီမှာနှိပ်ပါ (Click Here) Part 1 - Part 2
credits: Plot (IMDB), Preview (BritishChap007 @ youtube), Movies